I-China Ulwazi oluqhelekileyo lwefektri ye-Screw kunye nabaxhasi | Tanso
Okwangoku, izixhobo ezisetyenziswa rhoqo kwisikali eTshayina ziintsimbi ezingama-45, i-40Cr, intsimbi ye-ammoniated, i-38CrMoAl, i-alloy ephezulu yokushisa, njl.
I-1) Hayi. I-45 yensimbi ishibhile kwaye inomsebenzi olungileyo wokusebenza, kodwa ukungahambelani kwayo, ukunganyangekiyo kunye nokunyuka kokuguga akulunganga.
Unyango lobushushu: Icinyiwe kwaye yacaphuka hb220-270, isantya esiphezulu sokucima i-hrc45-48.
2) Umsebenzi we-40Cr ungcono kunowentsimbi engama-45, kodwa kufuneka rhoqo ubekwe ngomaleko we-chromium ukuphucula amandla ayo ombuso kunye nokunxiba ukumelana. Kodwa imfuneko yecrombum plating layer ingaphezulu, ungqimba lobuncinci kakhulu kwaye kulula kakhulu ukunxiba, lukhulu kakhulu, kulula ukuwa, kodwa emva kokuwa, luyakhawulezisa ukuvela, olungasetyenziswanga kangako.
Unyango lobushushu: ubushushu be-hb220-270, ubunzima be-chrome plated HRC> 55
I-3) I-Nitriding iron kunye ne-38CrMoAl inemisebenzi ebalaseleyo kwaye isetyenziswa ngokubanzi. Ngokubanzi, ungqimba lwe-nitriding luyi-0.4-0.6mm. Kodwa olu hlobo lwedatha lunokumelana nokuvela kwe-hydrogen chloride ngobuchule obuphantsi kunye nexabiso eliphezulu.
I-4) idatha ephezulu kakhulu kunenye idatha. Idatha akufuneki igcinwe. Uninzi lwazo zisetyenziswa kwisikere se-halogen-free screw somatshini wokubumba. Idatha ine-anti-oxidation ephezulu, anti-corrosion kunye nokuchasana nokwaluphala, kunye nonyango lokushisa hra55`60.
Isikhuhli sokungenela sisebenza phantsi kobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu, oomatshini abakhulu be-torque kunye nendawo ephezulu yokubaleka ixesha elide. Izinto zokuqala ezimbalwa zifunwa ziimeko zenkqubo, kwaye iilahleko ngenxa yokuxabana akunakufikeleleka. Ngokubanzi, isikrufu siye safakwa-nitride ukuze siphucule ubulukhuni bomhlaba, oko kukuthi, ukuphucula ukuchasana kokunxiba. Nangona kunjalo, ukuba unobangela wokunxiba ungakhathalelwanga, ukuba ukunxiba akuphungulwanga ngokusemandleni, ubomi bokusebenza kwesikali buya kuncitshiswa kakhulu.
Oku kulandelayo kuchaza oonobangela bokunxiba kwesikali kunye neendlela zokunciphisa ukunxiba
1. Iplastiki nganye inomgangatho wobushushu obuqhubela phambili. Ubushushu bokulungisa umgqomo kufuneka bulawulwe ukuze bube kufutshane nesixa sobushushu. Iplastiki egranular ingena kwisitya sokutya esivela kwi-hopper, kwaye iya kuqala ukufikelela kwicandelo lokutya, okuya kubonisa ngokuqinisekileyo ukungagungqi okomileyo. Xa eziplastikini zingenabushushu kwaye ukunyibilika kungalingani, kulula ukwenza udonga lwangaphakathi lomgqomo kunye nokunxiba kwangaphandle kwesikere. Ngokufanayo, kwicandelo lokuqinisa kunye ne-homogenizing icandelo, ukuba imeko yokunyibilika kweplasitiki ayinasiphazamiso, iya kwenza ukwanda kokunxiba.
Isantya kufuneka silungiswe ngokufanelekileyo. Kuba ezinye iiplastiki zongezwa ngeearhente zokuqinisa, ezinje ngeglasi yeplastiki, iiminerali okanye ezinye iifilitha. Ukuxabana kwezi zixhobo kwizixhobo zetsimbi ezingasetyenziswayo kuhlala kuyinto enkulu kunaleyo yeplastiki ezinyibilikisiweyo. Kwitenxo kwezi plastiki, ukuba isantya esiphezulu sisetyenzisiwe, ukuphuculwa kwamandla e-shear kwiseplastiki kuya komeleza kwakhona imicu ye-shredded efanayo. Iintsinga ezihluliweyo zineemiphetho ezibukhali kwaye zinxiba okuDibeneyo okunamandla. Xa i-minorganic minerals ijiya ngesantya esiphezulu kumphezulu wesinyithi, umphumo wabo wokugrumba awuba mncinci. Ke, isantya akufuneki ukuba sihlengahlengiswe kakhulu.
Ixesha lokuposa: Jun-03-2020